सागको भलिबल खेल आजबाट, कति छ टिकट मूल्य ? - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com सागको भलिबल खेल आजबाट, कति छ टिकट मूल्य ? - नागरिक रैबार
सागको भलिबल खेल आजबाट, कति छ टिकट मूल्य ?
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत भलिबल खेलको प्रतिस्पर्धा आज बाट सुरु हुँदैछ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्ड हलमा बुधबार पुरुष र महिला दुवै तर्फको समूह चरणका खेलहरु सुरु हुनेछ । समूह चरण अन्तर्गत नेपालको दुवै टिमले पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग खेल्दैछ ।
नेपाली महिला टिमले बंगलादेशसँग अपरान्ह ३ बजे खेल्नेछ । पुरुष भलिबल टिमले साँझ ७ बजे बंगलादेशसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भलिबल हेर्नका लागि टिकट मूल्य राखेको छ । भलिबलको टिकट मूल्य ५ सय राखिएको छ । टिकट इसेवाबाट किन्न सकिनेछ ।
यस्तै भलिबलको प्रत्यक्ष प्रशारण एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनले गर्नेछ । अनलाइन र युट्युबमा भने प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न अनुमति छैन् ।
प्रचण्ड हेलिकप्टर चढेको हामीलाई थाहा छैनः निर्वाचन आयोग